Xaalad markay ku soo wajahdo sideed ku xallisaa? - BBC News Somali
Xaalad markay ku soo wajahdo sideed ku xallisaa?
Xigashada Sawirka, Carl Court
Khubaro ku howlan sida qofka cadaadiska soo wajaha u maareyn karo
Inta aynu nool nahay waxaa mararka qaar nala soo darso arrima lama filaan ah sida waddooyinka oo kuugu xirmo zaxmadda gawaarida awgood kaddibna aad shaqada ka habsaanto, boorsada jeebka oo ay waxbadan kuugu keydsan yihiin oo kaa lunto, dadka oo wax aad ka filaneyn kuugu sameeyo, albaabka gaarigaaga oo kuu furmi waayo iwm.
Haddaba dadka qaar ayaa marxaladaha noocaasi ah ee la soo darso isku daya iney xoog iyo muruq xal ugu raadiyaan.
Balse dalka Japan xaalku sidaa waa uu ka geddisan yahay oo waxay xaalad kasta oo la soo deristo u isticmaalaan erey ah 'shou ga nai' uu micnihiisu yahay 'lama caawin karo'.
Britain oo u digtay hey'adaha gargaarka ee dalkaasi
Haddaba koox khubaro ah oo la talinta shariikadaha laga leeyahay Japan iyo kuwa aan Japan laga lahayan intaba ayaa in mudda ah ka shaqeeyneysay sidii ay 'shou ga nai' wax uga beddeli lahayd.
Waxayna khubaradu ka shaqeeyeen sidi ay dadka reer Japan halka ay waxa dhacay ku mashquuli lahayeen sida shacabka Mareykanka oo kale wax kasta oo dhaca ay yidhahdaan wey dhaceen ayna ka sii socdaan.
Markaad la kulanto Zaxmada gawaarida oo aad aragto safaf dhaadheer si la mid ah sawirkan kor ka muuqda ayaad adeegsanysaa ereyga ah "shou ga nai" ama erey kale oo la mid ah oo luuqada kale u dhigmo.
Daraasaadka qaar ayaa waxay tilmaamayaan dadka waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo ay la kulmaan maareeya iney si dadka kale ay caafimaad ahaan farxadba kaga duwan yihiin.
Tusaale ahaan daraasad ay jaamacadaha Toroto iyo Califonia ay arrintan ku sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen "dadka inta badan wax kasta oo la soo darso laqo ama u dulqaato iney saameyn badan u geysaneyn wixi ku dhacay ama ay la kulmeen" caafimaad ahaanna ay ka wanaagsan yihiin.
Xigashada Sawirka, Alamy Stock Photo
Xaalad kasta xal u raadi
"Haddii aad ku wanaagsan tahay inaad yareyso dhacdooyinka maalin walba aad la kulanto oo aad, aad uga sii fikirin oo aad dareenkaaga xakameyso waxaad dareemeysaa raaxa waxaadna si fudud u heleysaa xal aad arrinta aad la ulantay kaga dabbaalan kartid".
Xaaladaha niyadjabka kuugu keena si aad ula dagaallanto waa inaad isweydiisaa su'aalahan: Maxaan iisu niyad jabinayaa? Arrinta niyad jabka igu keentay sideen wax uga beddeli karaa? Haddii aad awoodi weydana ugu yaraan waa inaad isweydiisaa maxaan arrinkan isugu mashquulinayaa?
Muran ka dhashay madaxweyne haweenay ku dhunkaday fagaare
Khubaradu waxay leeyihiin mashquulka iyo waxyaabaha niyad jabka kuugu keeno sida loo mareeyo iney ku xiran tahay hadba xaaladdu nooca ay tahay.
Mashquulka ha isa sii raacinin
Barafasoor Stephanie Preston oo cilmu nafsiga ka dhigo jaamacadda Michigan wuxuu leeyahay xaalad kasta oo kula soo daristo wax waad ka beddeli kartaa waa haddii isdajiso si degganna u qiimeyso.
Nasiib wanaag qofka baniaadamka ah wuxuu awood u leeyahay inuu qaado tillaabbooyin oo xaaladaha niyadjabka iyo murugta kuugu abuuri kara lagu yareyn karo ama wax looga baddali karo.
Sida shaqada haddaad ku qancin inaad baddalato, xaaska haddeey kuugu xumaato oo aad isfahmi weydaan inaan isaga tagto ama aad fasaxdo iwm…
Ariga 'waxaa soo jiita wajiyada dadka faraxsan'
Dadku intooda badan waxay isku dayaan iney iskood u xalliyaan xaaladaha kugu keeni kara niyad jabka ama mashquulka balse waxay ku xiran tahay go'aan qaadashada iyo ka go'naashaha qofka, waana awoodda gaarka ah uu ilaahey adoomadiisa siiyey, taasi ayaana muhiim ah si qofka culeyska iyo cadaadiska hayo uu u yareeyo waana sababta keentay xumaan iyo samaanba in loo isticmaalo ereyga ah "shou ga nai".